Soomaliland oo diiday in Laascaanood ay ka dagto Diyaarad Sida Deeq Daawo ah – Kismaayo24 News Agency
by admin 24th October 2018 078
Maamulka Somaliland ayaa la sheegay in ay diiday diyaarad deeq daawo ah u siday Laascaanood oo ay soo dirtay dowladda Federaalka somalia waxaana maamulka dagmada laascaanood ay diyaaradda u diideen in ay caga dhigato garoonka diyaaraddaha Laascaanood.
Daawooynka ayaa loogu tala galay dadkii ku dhaawacmay dagaal beeleedka ka socda deegaanno ka tirsan Gobolka Sool waxaa sidoo kale diyaaradda ay qaadi laheyd dhaawacyada culus qaarkood.
Inta la xaqiijiyay dagaal beeleedka waxaa ku dhintay dad ka badan 50 ruux halka dhaawaca uu ka badanyahay 80 ruux.
Dhaawacyada ayaa la gaarsiiyay cisbitaalada magaalada laas caanood iyadoo xaaladdooda caafimaad halkaas lagu dabiibaayo
Dhaawacyada qaarkood ayaa la geeyay cibitaalka wuqooyga magaalada Galkacyo ee Maamulka Puntland halkasi oo xaaladdooda caafimaad lagu dabiibaayo.
Dagaal beeleedka oo socda inkabadan 48 saacadood oo xiriir ah ayaa waxaa laga baqdin qabaa in qasaaraha dagaalka uu sii bato maadama aysan jirin cid ilaa iyo hadda kala dhex gashay laba beelood.
Gudiga Dhexdhexaadinta Beelaha dagaalamaya ayaa ku eedeeyay Maamulka soomaliland hurinta colaadda iyo in ay ciidankii labada beelood ku kala dhex jiray ay soomaliland ka sartay doraad galab shalayna uu dagaalka qarxay.
Top News:- Ahlusunna oo shirweyne lagu soo xulaya Barlaman ku qabanaysa Dhusamareeb.
War Cusub: Akhriso Tirakoobka Rasmiga ah ay Dowlada Talyaaniga ka soo saartay Tirada Soomalida ah ee Tahriibayasha ah oo Talyaaniga……